Soomaaliya oo ka qeyb gashay shir muhiim ah oo lagu qabtay magaalada New Delhi – Bandhiga
Home Soomaaliya oo ka qeyb gashay shir muhiim ah oo lagu qabtay magaalada New Delhi
Soomaaliya oo ka qeyb gashay shir muhiim ah oo lagu qabtay magaalada New Delhi
in Soomaaliya oo ka qeyb gashay shir muhiim ah oo lagu qabtay magaalada New Delhi
Magaalada New Delhi ee dalka Hindiya waxaa shir uga qeyb galaya Wasiirka Wasaradda Badroolka iyo Macdanta Xukumadda Fadaraalka Soomaaliya Mudane C/rashiid maxamed Axmed kaa kaa oo ah shirka tamarta ee Hindiya oo looyaqano CERAWEEK.
Wasiirka waxaa shirka ku wehlinayay danjiraha Soomaaliya u fadhida dalka Hindiya Faadumo C/laahi Maxamuud Insaaniya iyo lataliyaasha Wasaaradda Badroolka iyo Macdanta Soomaaliya.
Hay’adda IHS MARKIT ayaa soo qaban qaabisay shirka waxana kasoo qaybagalay dowlado ay Soomaaliya iyo Mareykanka kamid yihiin oo shirka lagu casuumay iyo shirkado caalami ah.
Inta uu socday shirka waxaa looga hadlayay tamarta iyo guud ahaan qayaraadka kala duwan ee dalkaas.
Wasiirka ayaa kulan laqaatay Wasiirka Badroolka iyo Gaaska dabiiciga ah DHARMENDRA PRADHAN waxa ayna ka wadahadleen sida ay dowlada Hindiya uga gacansiin lahed tabarida shaqalaha iyo in ay yeshaan wada shaqayn dhaw.
Soomaaliya ayaa hadda ku jirta iibgeynta qaybo ka mid baloogyada shidaalka waxana aad dar dar xoogan ugu socdaa tageerada iyo gacansiinta ay ka helayan wadamada iyo shirkadaha daneeya shidaalka iyo macdanta.